1513 days ago	(http://khinoomay77.blogspot.com)
ဘယာကြော်သုပ်ဒီနေ့အိန္ဒိယဆို	read more » Discuss Add this link to... Bury
Add to: ဘယာကြော်သုပ်ဒီနေ့အိန္ဒိယဆို">
1513 days ago	(http://warwarkhaingmin.blogspot.com)
အလည်လာကြတဲ့သူတွေအားလုံးပဲ မင်္ဂလာပါရှင်..ဒီပို့စ်လေးကတော့ စိတ်ကူးပေါက်ရာ အစုံသုတ်ကလေးတွေရေးချင်လို့ ရေးဖြစ်လိုက်တာပါ...အခုတလော ပို့စ်ရေးမယ်စိတ်ကူးမိတိုင်း ပျင်းနေတာနဲ့ဘာရေးရမယ်မှန်းမသိဘူး ၊ ခေါင်းစဉ်တွေကရှိနေပေမယ့် စာတွေကထွက်မလာတော့ မရေးတတ်တော့ပဲ မရေးဖြစ်ပဲဖြစ်နေလို့ ဆားတွေချက်နေတာပါ....<	read more » 1 Comment Add this link to... Bury
Girls Generation at Pattya
1513 days ago	(http://feedproxy.google.com)
At 21st of March, Girls Generation was in international music festival 2009 at Pattya. read more » Discuss Add this link to... Bury
1514 days ago	(http://nineninesanay.blogspot.com)
တစ်ခါက ခရီးသွားတစ်ဦးဟာ တောထဲမှာသေနေတဲ့ မြင်းကျားတစ်ကောင်ကို တွေ့လိုက်တယ်။ မြင်းကျားဘေးမှာ မွေးကင်းစ မြင်းကျားလေးတစ်ကောင်ကိုပါ တွေ့လိုက်တယ်။"သနားစရာ သတ္တဝါလေးပါလား.. မွေးရခက်လို့ မိခင်သေပြီး ကလေးပဲရှင်နေခဲ့တယ်"ခရီးသွားက မြင်းကျားလေးကို ယူပြီး သူ့ရဲ့ခြံထဲမှာ မွေးထားလိုက်	read more » Discuss Add this link to... Bury
Add to: ခရီးသွားက မြင်းကျားလေးကို ယူပြီး သူ့ရဲ့ခြံထဲမှာ မွေးထားလိုက်">
British ခရီးသွား တစ်ယောက် အသတ်ခံရ
1514 days ago	(http://feedproxy.google.com)
Thai နိုင်ငံ တောင်ပိုင်း Andaman Sea ကမ်းရိုးတန်း မှ မြန်မာ ငါးဖမ်းသမား ၃ ယောက်ကို ထိုင်းရဲ များက British အမျိုးသား တစ်ယောက် ကို သတ်မူဖြင့် ဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။Andaman Sea ကမ်းရိုးတန်းတွင် အပန်းဖြေ ရွက်သဘောင်္ဖြင့် ခရီးနှင်နေသော အသက် ၆၄နှစ်အရွယ်ရှိ British အမျိုးသား Malcolm Robertson ရဲ. လည်	read more » Discuss Add this link to... Bury
blogger mama.....ma ma..blogger!
1514 days ago	(http://khinoomay77.blogspot.com)
blogger mama ..ma ma read more » Discuss Add this link to... Bury
Add to: blogger mama ..ma ma ">
1515 days ago	(http://ywartharlay-ytu.blogspot.com)
လရိပ်ပြာရွှေရည်လမ်းရေကြည်ချမ်းရှိတဲ့ဆီပန်းနံ့သာနေခြည်နွေးပျံ့ပျုးသာမွှေးတဲ့ဆီစောင်းယဉ်သာငြိမ့်ငြိမ့်အေးသံချိုတေးတွေရှိတဲ့ဆီပျော်ချစ်ခင်တူဆင်နွှဲဖို့မခေါ်ပစ်ခွာသူတွင်မုန်းလည်းလွမ်းလျက်ကမ်းတစ်ဖက်ရယ	read more » Discuss Add this link to... Bury
1515 days ago	(http://khinoomay77.blogspot.com)
ကိုယ်တို့မြန်မာလူမျိူးတွေ ဟာ သူများနဲ့ မတူတဲ့	read more » Discuss Add this link to... Bury
Add to: ကိုယ်တို့မြန်မာလူမျိူးတွေ ဟာ သူများနဲ့ မတူတဲ့">
| Bookmarks « previous12345678910...43 next »